တစ်မိသားစုလုံးကို မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းခွေးလေး။ – SoShwe
Home/Other/Animals/တစ်မိသားစုလုံးကို မီးဘေးအန္တရာယ်မှ ကယ်ဆယ်ပေးနိုင်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းခွေးလေး။
Hero Dog saves family from fire https://www.facebook.com/SavannahFireRescue/photos/a.1417653475019724/2523849124400148/?type=3&theater Credit: Savannah Fire Rescue
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရှိ Sammy ဟုအမည်ရသည့် အိမ်မွေးခွေးလေးသည် သူ့ရဲ့ ပိုင်ရှင်မိသားစုဝင်များကို မီးလောင်နေသည့် အိမ်အတွင်းမှ အချိန်မှီထွက်ပြေးနိုင်အောင် ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ (၆) ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဆိုပါမီးလောင်မှု၌ Sammy သည် မီးစတင်လောင်ကျွမ်းသည်ကို မြင်တွေ့သည်နဲ့တစ်ပြိုင်နက် အဆက်မပြတ်ထိုးဟောင်ခဲ့ပြီး မိသားစုဝင် (၅) ယောက်လုံးကို အိပ်ရာမှလန့်နိုးစေခဲ့ပါတယ်။
Savannah မီးသတ်တပ်ဖွဲ့က “Sammy ဟာ မိသားစုဝင် (၅) ယောက်လုံးကို မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ထဲကနေ အချိန်မှီကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီး မိသားစုဝင် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး . . . ” ဆိုပြီး ၄င်းတို့ရဲ့ Facebook မှတစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါစာသားနဲ့အတူ ထရပ်ကားနောက်ခန်း၌ ထိုင်နေသည့် Sammy ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း အတူတကွတင်ထားခဲ့ပါသေးတယ်။
Sammy နဲ့အတူ မိသားစုဝင် (၅) ယောက်လုံး အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပေမယ့် Sammy တို့အိမ်မှ အခြားသော အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များမှာမူ မီးလောင်မှု၌ သေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒေသအာဏာပိုင်များက “နောက်ထပ်ခွေးတစ်ကောင်နဲ့ ကြောင်နှစ်ကောင်တို့ကတော့ အသက်မရှင်ခဲ့ပါဘူး။ မီးသတ်သမားတွေက မီးကို ကြိုးစားငြိမ်းသတ်ပြီး အခြားမီးသတ်သမားတွေကတော့ သူတို့ သုံးကောင်ကို ခြေရာခံရှာဖွေခဲ့ပေမယ့် သူတို့ရဲ့အသက်ကို မကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။” ဟု ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
တစ္မိသားစုလံုးကို မီးေဘးအႏၱရာယ္မွ ကယ္ဆယ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ သူရဲေကာင္းေခြးေလး။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံရွိ Sammy ဟုအမည္ရသည့္ အိမ္ေမြးေခြးေလးသည္ သူ႔ရဲ႕ ပိုင္ရွင္မိသားစုဝင္မ်ားကို မီးေလာင္ေနသည့္ အိမ္အတြင္းမွ အခ်ိန္မွီထြက္ေျပးႏုိင္ေအာင္ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၆) ရက္ေန႔ နံနက္အေစာပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အဆိုပါမီးေလာင္မႈ၌ Sammy သည္ မီးစတင္ေလာင္ကြ်မ္းသည္ကုိ ျမင္ေတြ႕သည္နဲ႔တစ္ၿပိဳင္နက္ အဆက္မျပတ္ထိုးေဟာင္ခဲ့ၿပီး မိသားစုဝင္ (၅) ေယာက္လံုးကို အိပ္ရာမွလန္႔ႏိုးေစခဲ့ပါတယ္။
Savannah မီးသတ္တပ္ဖဲြ႕က “Sammy ဟာ မိသားစုဝင္ (၅) ေယာက္လံုးကို မီးေလာင္ေနတဲ့အိမ္ထဲကေန အခ်ိန္မီွကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး မိသားစုဝင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲျခင္း မရွိပါဘူး . . . ” ဆိုၿပီး ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ Facebook မွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္အဆုိပါစာသားနဲ႔အတူ ထရပ္ကားေနာက္ခန္း၌ ထိုင္ေနသည့္ Sammy ရဲ႕ ဓာတ္ပံုကိုလည္း အတူတကြတင္ထားခဲ့ပါေသးတယ္။
Sammy နဲ႔အတူ မိသားစုဝင္ (၅) ေယာက္လံုး အသက္အႏၱရာယ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေပမယ့္ Sammy တို႔အိမ္မွ အျခားေသာ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ားမွာမူ မီးေလာင္မႈ၌ ေသဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက “ေနာက္ထပ္ေခြးတစ္ေကာင္နဲ႔ ေၾကာင္ႏွစ္ေကာင္တို႔ကေတာ့ အသက္မရွင္ခဲ့ပါဘူး။ မီးသတ္သမားေတြက မီးကို ႀကိဳးစားၿငိမ္းသတ္ၿပီး အျခားမီးသတ္သမားေတြကေတာ့ သူတုိ႔ သံုးေကာင္ကို ေျခရာခံရွာေဖြခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႔ရဲ႕အသက္ကို မကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။” ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။
Tags Dog Family Pet
Previous စပါးအုံ၊ ခွေးအနဲ့ ခွေးတူဝက်တူတို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်တိုက်ပွဲ။
Next ကြည့်ရှုသူတွေကို အံ့သြမှင်သက်သွားစေခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးရဲ့ အကစွမ်းရည်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများကို ရေတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းထားတာဖြစ်ပြီး ရေအောက်ကမ္ဘာကြီးကလည်း လူသားတွေနေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ခုလိုမျိုးပဲ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့အရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ ရေအောက်ထဲက ဒဏ္ဍာရီလာနေရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စူးစမ်းလေ့လာမှုတွေ ပြုလုပ်နေကြပေမယ့် အတိုင်းမသိ …